I-Downtown Riverside Cottage w/ Ithiyetha yangaphandle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCayla
Indlu yethu enomtsalane & netofotofo engasemlanjeni ibonelela 'ngekhaya elikude nekhaya' ngokundwendwela eBuckhannon, WV-Idolophu encinci yokuGetaway eneBig Time Charm.
Ifumaneka kumbindi wedolophu yaseBuckhannon, ungajonga iindawo zokutyela ezizezasekhaya kunye neevenkile zeSitrato esikhulu kwimizuzu nje embalwa okanye ubuke ubuhle bomlambo ukusuka kubunewunewu bendlu yangasemva.
Iphelele kwiintsapho kunye namaqela amancinci, le ndawo inebhedi yokumkanikazi kwigumbi lokulala lokuqala, ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokulala lesibini, kunye nebhedi enkulu kwigumbi lokuhlala. Ilala kamnandi 4 kodwa iyakwazi ukuhlalisa undwendwe olongezelelweyo esofeni ukuba kuyimfuneko. Inika ikhitshi esebenza ngokupheleleyo kunye nefriji egcwele ubungakanani, i-oveni / isitovu, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, umenzi wekofu, kunye netoaster. Izinto ezongezelelweyo zibandakanya iwasha, isomisi, iWifi, iAC, iNetflix kunye neHulu.
Ngaphandle, unokufumana isikrini sethiyetha kunye neprojekti yokubukela iimuvi, izixhobo zokuloba emlanjeni, indawo yomlilo enezitulo zenkampu ezilungele ukutshisa i-s'mores, kunye nomgodi womlilo wegesi ukugcina ukufudumala ngobusuku obupholileyo.
32" HDTV ene-I-Hulu, I-Netflix
Umbuki zindwendwe ngu- Cayla
I’m a graduate student at Kansas State and a chemist for a CBD company in West Virginia. I spend most of my free time traveling.
Ndifumaneka lula ngefowuni, itekisi, okanye umyalezo othe ngqo xa kufuneka.